Saado Ali Warsame waa "Rikoodh" rikoodhna wax lagu shubo mooyiye anfac kale male
5 April 2010 SMC
Shayga rikoodhka la yidhaa waa shaay ay bini`aadamku u isticmaalan in ay wax ku dhagaystaan waxna ku duuban, bini`aadamkuna waxu u isticmaali kara kolba siduu rabo iyo wuxu damco markaas in uu u isticmaalo Saado Ali-na waxay ka dhigantahay rikoodh-kaas aad kolba sidaad rabtid u isticmaali kartid dhankaad doontidna u jeedin kartid. waa fanaanad ka duwan faniinta kale ee ay la jeerka tahay, waa fanaanad aan waxba diidin waxna eegin ee sidii rikoodh-ka kolba hees u jeedo laga leeyahay lagu shubo oo lagu dhagaysto si loo baahiyo. Labadan heesood ay dhawaan soo saartayna waxay la mid yihiin heesihi hore loogu shuban jiray sida rikoodh-ka oo maaha kuwo micno weyn ku fadhiya ama ay masuuliyadeeda ay qaadi karto ama ay ka jawaabi karto wixi ay deelqaaf la imaadan.
Tusaale ahaan gabaygii ay kaligeed ku ahayd gabadh ahaan ee ay kaga qeeb gashay silsiladii "DEELEY" ayaa inoogu filan in ay tahay rikoodh gabaygaas uu ku shubtay ama ku daaray rikoodh saado ali odaygii Idaaja. heesihi kale ee ay ku faanto ay leheed waxaan kaga soo hor jeeday dawladi macangagi siyaad bare wax ay la mid yihiin uun sida kuwaas lagu shuban jiray laguna daari jiray rikoodh Saado Ali.
labadan heesoodna waa lagu daaray rikoodhka su`aashu yaa ku daaray yaa ka dambeeye weeyi ma sanguba mise waa kuwo waayo hore cidlo lagaga tagay. Maxaa kalifay rikoodh Saado ali in ay 20 sano ka dib ay ka jawaabto heesti halyeey Abdinuur Allaale mise waagaas cidba rikoodh saado Ali wax ku daarin oo maanta ayaa rikoodhki falaagoobay dib wax loogu shubay... BY: Abdifatah O. Abdi (Abdi Kling King) Kling_king@hotmail.com